Wararka - Maxay yihiin noocyada, qeexitaannada iyo cabbirka caqabadaha dhawaaqa guud ee suuqa?
Maxay yihiin noocyada, qeexitaannada iyo cabbirka caqabadaha dhawaaqa guud ee suuqa?
Materials Qalabka ugu muhiimsan ee ka hortagga dhawaaqa waa carqaladaha dhawaqa birta ah (birta lagu xiro, godadka mesh birta ah), carqaladaha dhawaaqa birta ee birta ah, Caqabadaha dhawaqa kumbuyuutarka ee PC, carqaladaha dhawaqa dhoobada, iwm.
Qeexitaannada guud ee caqabadaha dhawaaqa:
1) Cabbirka shaashadda: 500mm * 2000mm, 500mm * 3000mm
2) Dhumucda xaashida hal-saxan ee shaashadda ah ee shaashadda: 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm
3) Wadarta guud ee shaashadda: 80mm, 100mm,
4) Safka: H-beam 100mm * 100mm * 6 * 8mm, 125mm * 125mm * 7 * 10mm
Dhererka: 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m, 5.5m, 6m
Yle Qaab: toosan, oo geesaha ku yaal qaybta sare
● Midab: cawl madow, cawl khafiifa
Treatment Daaweynta oogada: galvanized + buufin
Degganaansho: ku dar xarig jijin
● Qaybaha ugu muhiimsan ee xarkaha dhawaaqa: Aasaaska, tiirarka, shaashadaha, hagaajinta, shaabadaha, qaarna sidoo kale waxaa ku jira qaab dhismeedka kore.
1) Jirka shaashadda codka: xaashida galvanized, gadaal gadaal, keel, dhogor galaas ah, Filimka DuPont, heerka feedhka hore ee ka sarreeya 25%;
2) Tiirarka xayndaabka codka: Birta H-qaabeeya, jiifku kala firidhsan yahay, dhejis isku dhejisan, feeraha gudaha, iyo feeraha bannaanka;